China MSPR ရော်ဘာစီစီသော Slurry Pump ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Depump Technology
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဒေါင်လိုက် Slurry Pump > MSPR ရော်ဘာစီတန်း Slurry Pump
MSPR ရော်ဘာစီချယ်ထားသော Slurry pump သည်ဒေါင်လိုက်ဗဟိုမှဆန့်သောအပင်စုပ်စက်ဖြစ်သည်။ စုပ်စက်၏အ ၀ င်သည်ဒေါင်လိုက်အောက်သို့ကျဆင်းသွားပြီးထွက်ပေါက်သည်အခြားဘက်ခြမ်းရှိဒေါင်လိုက်အပေါ်သို့တက်သည်။ အဓိကအားဖြင့်အောက်ခံ filter element, pump body, impeller, shaft, guard plate, bracket နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ စုပ်စက်၏အထက်ပိုင်းကိုဝက်ဝံများကထောက်ပံ့သည်။
စုပ်စက်ကိုအရည်အောက်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးရိုးတံတံဆိပ်ခတ်ခြင်းမရှိဘဲစီးဆင်းသောအစိတ်အပိုင်းများကို wear -proof ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ဤစုပ်စက်၏ဂီယာအမျိုးအစားမှာ BD နှင့် DC ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Belt Drive နှင့် Direct Drive တို့ဖြစ်သည်။
pump pump suction port ရဲ့ညှနျကွားကနေနာရီလက်ယာရစ်လှည့်သည်။
SP အမျိုးအစားနစ်မြုပ်မှုန့်စုပ်စက်၏အသုံးပြုမှုနယ်ပယ် - တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းသောအမှုန်များနှင့်မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှုန်းကိုသယ်ဆောင်ရန်အထူးသင့်တော်သည်။
ကျောက်မီးသွေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးနှင့်အခြားကဏ္inများတွင် MSPR ရော်ဘာစီတန်းထားသော Slurry pump ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
ရော်ဘာစီတန်းဒေါင်လိုက် Slurry Pump
ကျောက်မီးသွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဒေါင်လိုက် slurry pump ကိုသတ္တု၊ သတ္တုတွင်း၊ ကျောက်မီးသွေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊
pump shaft သည်အလျားလိုက်လေယာဉ်နှင့်အပြိုင်ဖြစ်သည့်အခါ၎င်းကိုအလျားလိုက် slurry pump ဟုခေါ်သည်။ pump shaft အနေအထားသည်အလျားလိုက်လေယာဉ်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး၎င်းကိုဒေါင်လိုက် slurry pump ဟုခေါ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အထွေထွေဒေါင်လိုက် slurry pump ကို slurry tank တွင် slurry ကိုစုပ်ရန်အသုံးပြုသောကြောင့် pump pump ၏အစိတ်အပိုင်းကိုအရည်အဆင့်အောက်တွင်ထားသင့်သောကြောင့်၎င်းကိုနစ်မြှုပ်နေသော slurry pump ဟုခေါ်သော်လည်းရေထဲတွင်တစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါ။ မော်တာနှင့်အခြားစုပ်စက်မဟုတ်သောခေါင်း၏အစိတ်အပိုင်းများကို၎င်းကို submersible slurry pump ဟုခေါ်သည်။
သဲရွှံ့ဒေါင်လိုက် Slurry Pump
ငါတို့ထံမှသဲရွှံ့ဒေါင်လိုက် slurry စုပ်စက်ဝယ်ယူရန်ကြိုဆိုပါသည်။
ဒေါင်လိုက် Sump Slurry Pump
ဒေါင်လိုက် slurry pump ဟုလည်းခေါ်သောနစ်မြုပ်သော slurry pump သည်ရှည်လျားသော ၀ င်ရိုးစုပ်ယူသည့်စုပ်စက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အလုပ်အတွက်အရည်တွင်နှစ်မြှုပ်နိုင်သည်။ ဒေါင်လိုက် sump slurry pump များသည်မြေအောက်အောက်ရှိရေကန်များ၏မြေသြဇာကိုသယ်ဆောင်ရန်သင့်လျော်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အလျားလိုက်ပန့်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စုတ်ယူခြင်းမရှိသောကြောင့်မြေပြင်မှတူးထားသောရေကန်များသို့မပို့ဆောင်နိုင်ပါ။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော MSPR ရော်ဘာစီတန်း Slurry Pump ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Depump Technology သည်တရုတ်ပြည်၏ကျော်ကြားသော MSPR ရော်ဘာစီတန်း Slurry Pump ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များရှိပြီးအမြောက်အများထုပ်ပိုးပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းရဆုံး၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!